လေ့လာပြီး တွေးစရာ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
။ နောက် ပြီး " နိုင် ငံ တစ် နိုင် ငံ ရဲ့ ကြွယ် ဝ မှု ကို ရုပ် ဝ တ္ထု ပိုင်း တွေ နဲ့ ပဲ မ ဆုံး ဖြတ် သင့် ပဲ အ တွေး အ ခေါ် ယဉ် ကျေး မှု ပ ညာ ရေး တို့ လို ကိုင် တွယ် လို့ မ ရ တဲ့ အ ရာ တွေ နဲ့ လည်း ဆုံး ဖြတ် သင့် တယ် " လို့ ထပ် ပြော ခဲ့ တယ် ။ ကွန် မြူ နစ် တ ရုတ် နိုင် ငံ က ရှား ပါး လွန်း တဲ့ အ ယူ အ ဆ ကို ကိုင် တွယ် ထား နိုင် တဲ့ သူ တစ် ယောက် လို့ ပြော လို့ ရ တယ် ။ Huawei CEO ပြော တာ အ ရမ်း မှန် တယ် ။ အ ခု တ ရုတ် နိုင် ငံ ရယ် ၊ တ ရုတ် နိုင် ငံ ကို ထောက် ခံ နေ တဲ့ သူ တွေ ရယ် ကိုယ် တိုင် မ သိ ကြ သေး တာ ကြွယ် ဝ ချမ်း သာ မှု ဆို တဲ့ ပိုက် ဆံ ရဲ့ အ ပေါ် မှာ အ များ ကြီး ကျန် နေ သေး တယ် ဆို တာ ကို မ သိ ကြ သေး တာ ပါ ။ ငွေ ကြေး ချမ်း သာ တာ ရဲ့ အ ပေါ် မှာ ကျန်း မာ တာ တွေ ၊ လွတ် လပ် တာ တွေ ၊ ပျော် ရွှင် တာ တွေ ၊ ချစ် ခင် လေး စား တာ တွေ ၊ ဂုဏ် သိ က္ခာ တွေ ၊ ယုံ ကြည် မှု တွေ အ များ ကြီး ကျန် ပါ သေး တယ် ။ တစ် ခု ခု ကို ဆုံး ရှုံး လိုက် ရ မှ ငွေ ကြေး က ဘာ မှ မ ဟုတ် ဘူး ဆို တာ ကို သိ သွား တတ် ကြ ပါ တယ် ။ ပ ညာ နည်း တဲ့ သူ တွေ က တော့ အဲ့ ဒီ ကိ စ္စ တွေ ဆုံး ရှုံး သွား လည်း ပိုက် ဆံ ရှိ ရင် ဖြစ် တယ် လို့ ထင် နေ ကြ တုန်း ပဲ ။ တ ရုတ် နိုင် ငံ တိုး တက် ဖွံ့ ဖြိုး မှု က က မ္ဘာ ပေါ် မှာ ရှိ တဲ့ တစ် ခြား နိုင် ငံ တွေ အ တွက် အ ကျိုး ဖြစ် စေ ရင် ကောင်း မွန် တဲ့ ကိ စ္စ ဖြစ် စေ မှာ ပါ ။ သို့ ပေ မယ့် တ ရုတ် တို့ ရဲ့ ဗီ ဇ ဓ လေ့ စ ရိုက် အ ရ က မ္ဘာ့ အ ဆင့် နဲ့ အံ ဝင် အောင် လေ့ ကျင့် ယူ ကြ ရ ပါ လိမ့် အုံး မယ် ။ ပိုက် ဆံ ရှိ ရင် ကြိုက် တာ လုပ် လို့ ရ တယ် ဆို တာ အ ခြေ ခံ အ ဆင့် မှာ ပဲ ရှိ ပါ သေး တယ် ။ ပြော ရ ရင် တ ရိ စ္ဆာန် ဘ ဝ ထက် အ နည်း ငယ် သာ မြင့် တဲ့ ယဉ် ကျေး မှု အ ဆင့် ရှိ လူ တွေ နဲ့ အဲ့ ဒီ လူ တွေ ကျက် စား တဲ့ ပတ် ဝန်း ကျင် မှာ ခံ ယူ ထား တဲ့ သ ဘော တ ရား မျိုး ပါ ။ ပို ပြီး ယဉ် ကျေး တဲ့ သူ တွေ အ ဆင့် မှာ ပိုက် ဆံ က သပ် သပ် လူ က သပ် သပ် ခွဲ ခြား နိုင် ကြ ပါ တယ် ။ ခ ရီး သွား လုပ် ငန်း ဆို တာ ယဉ် ကျေး မှု ဖ လှယ် တာ ပဲ ။ ကိုယ့် နိုင် ငံ မှာ ယဉ် ကျေး မှု ဓ လေ့ ထုံး စံ တွေ က ဒီ လို ရှိ တယ် လို ပြော ပြ ကြ ပြီး လာ လည် ပတ် ကြ တဲ့ သူ တွေ ရဲ့ အ ပြု အ မူ ကို ကြည့် ပြီး သူ တို့ နိုင် ငံ က ဘယ် လို ရှိ လဲ လို့ ဆုံး ဖြတ် တတ် ကြ တယ် ။ နိုင် ငံ တ ကာ မှာ ခ ရီး သွား လုပ် ငန်း တွေ တ ရုတ် ခ ရီး သွား တွေ ကြောင့် ပို ပြီး ဖွံ့ ဖြိုး လာ တာ ငြင်း လို့ မ ရ ပါ ဘူး ။ ဒီ အ တွက် က မ္ဘာ့ နိုင် ငံ တိုင်း လို လို က တ ရုတ် ခ ရီး သွား တွေ က ဘယ် လို ၊ တ ရုတ် တွေ က ဘယ် လို ဆို တာ ကို သိ လာ ကြ တယ် ။ သိ လာ တာ နဲ့ အ မျှ လက် ခံ တာ ထက် ဆန့် ကျင် လာ ကြ တာ ပို များ လာ တယ် ။ ပိုက် ဆံ ရ လို့ သည်း ခံ နေ ကြ တယ် ဆို ပေ မယ့် နောက် ပိုင်း Zero budget လို ခ ရီး သွား ပုံး စံ တွေ ဖြစ် လာ ပြီး ပိုက် ဆံ ကို သာ အ သည်း အ မဲ တန် ဖိုး ထား ကြ တဲ့ တ ရုတ် တွေ ကို လက် မ ခံ ချင် ကြ တော့ သ လို ဖြစ် လာ ကြ တယ် ။ ဒါ က အ ပေါ် က Huawei CEO ပြော ခဲ့ တဲ့ အ ခြေ ခံ ပ ညာ ရေး အ ဆင့် လို့ ပြော ရင် မ မှား ဘူး ။ တ ရုတ် တွေ စီး ပွား ကောင်း လာ ပေ မယ့် သူ များ ရဲ့ ယဉ် ကျေး မှု ဓ လေ့ ထုံး စံ တွေ စည်း ကမ်း အ စဉ် အ လာ တွေ ကို မ လိုက် နာ ဘူး ။ လေ ဆိပ် တန်း စီ တာ နဲ့ သိ သာ တော့ တာ ပဲ ။ ဒါ ကြောင့် က မ္ဘာ့ လူ ထု အ များ စု က တ ရုတ် နိုင် ငံ နဲ့ အ မေ ရိ ကန် ဖြစ် နေ တဲ့ ကိ စ္စ မှာ တ ရုတ် တွေ က လွဲ ရင် တ ရုတ် နိုင် ငံ ကို ရှုံး သွား စေ ချင် ကြ တယ် ။ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ ပိုက် ဆံ ကို သာ တန် ဖိုး ထား နေ ကြ တဲ့ သူ တွေ ပိုက် ဆံ မ ရှိ မှ ကျန် တာ တွေ ကို လေး စား လာ မယ် လို့ ထင် မှတ် ထား ကြ လို့ ပါ ပဲ ။ ပိုက် ဆံ ကို သာ ပ ထ မ နေ ရာ မှာ ထား တော့ ဘ န ဖူး သိုက် တူး တယ် ဆို တာ မျိုး ကိုယ့် အ တွက် အ ကျိုး ရှိ မယ် ထင် ရင် ဘာ ကျင့် ဝတ် သိ က္ခာ မှ မ ထား တတ် ကြ တော့ ဘူး ။ ဗိုက် ထဲ က က လီ စာ တောင် ခွဲ ထုတ် ယူ ဖို့ ဝန် မ လေး ကြ တော့ တဲ့ အ ထိ ဖြစ် လာ ကြ တယ် ။ တ ရုတ် နိုင် ငံ အ နေ နဲ့ စ နစ် တ ကျ ပြင် ဆင် ရ ပါ လိမ့် မယ် ။ Huawei CEO ပြော သ လို အ ခြေ ခံ ပ ညာ ရေး က စ ပြီး ယဉ် ကျေး မှု တွေ ကို လေး စား တတ် လာ အောင် သင် ကြား ပေး ရ ပါ လိမ့် မယ် ။ အ ဓိ က တစ် ဖက် ကို လေး စား တတ် အောင် သင် ပေး ရ လိမ့် မယ် ။ တစ် ဖက် ကို လေး စား မှ တစ် ဖက် နစ် နာ မယ့် ကိ စ္စ မ လုပ် မှာ ။ Huawei CEO ပြော တာ မြန် မာ ပြည် အ တွက် ကော စဉ်း စား စ ရာ ပါ ပဲ ။ လက် ရှိ မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ ပ ညာ တတ် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ဘွဲ့ ရ တွေ ကိုယ် တိုင် မ ထင် မှတ် တဲ့ ကိ စ္စ မျိုး တွေ လုပ် ပြ နေ ကြ တာ မြင် ရ တယ် ။ ဟီ ရိ သြ တ္တ ပ္ပ ဆို တဲ့ အ ရှက် အ ကြောက် ကင်း လာ ကြ တယ် ။ ကိုယ် သ ဘော နဲ့ မ တူ ရင် ဘု ရား မှန်း တ ရား မှန်း မ သိ ကြ တော့ ဘူး ။ ရည် ရွယ် ချက် ရှိ ရှိ နဲ့ သူ တစ် ဖက် သား ကို ဒု က္ခ ရောက် အောင် ကြို တင် စီ စဉ် ဆောင် ရွက် ကြ တယ် ။ အုပ် စု ဖွဲ့ အ နိုင် ကျင့် တယ် ။ လိမ် ညာ ပြော ဖို့ ဝန် မ လေး ဘူး ။ ကိုယ့် လူ ကို မ နှိုင်း သင့် တဲ့ ဘု ရား နဲ့ အ ထိ နှိုင်း ပြီး ဘု ရား ဆု ပန် ဆ ရာ တော် ကြီး တွေ ကို တောင် စော် ကား ရဲ ကြ တယ် ။ လေး စား တဲ့ သူ က ခိုင်း ရင် အ မေ ရင်း ကို ပင် ခြေ ထောက် နဲ့ ကန် ပြ မယ် ဆို တဲ့ အ ထိ ဒု စ ရိုက် စိတ် တွေ ကြီး ထွား လာ ကြ တယ် ။ မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ Facebook နဲ့ နိုင် ငံ ရေး ရယ် လို့ ဖြစ် လာ တဲ့ နောက် ပိုင်း လူ မှု ရေး လော က ပျက် စီး နေ တာ ချ ရေး ပြ လို့ မ ကုန် နိုင် အောင် ပင် ဖြစ် နေ ပါ တယ် ။ အ နည်း ငယ် သော သာ သ နာ့ ဝန် ထမ်း တွေ တောင် ထင် ပေါ် လို စိတ် ကြောင့် မြတ် စွာ ဘု ရား ရဲ့ တ ရား နဲ့ ဆန့် ကျင် လာ ကြ တာ မျိုး မြင် ရ တယ် ။ ဒါ တွေ အား လုံး ပ ညာ ရေး ကြောင့် ပ ညာ ရည် နိမ့် လို့ ဖြစ် နေ ကြ ရ တာ ပါ ။ ဒီ လောက် ပ ညာ တတ် ဘွဲ့ တွေ ယူ ထား တာ ပဲ လို့ ပြန် ပြော လည်း သူ တို့ တ ကယ် ပ ညာ မ တတ် ကြ သေး ပါ ဘူး ။ အ လွတ် ကျက် ထား တဲ့ စာ တွေ သာ ရ ထား ကြ တဲ့ သူ တွေ ပါ ။ ပ ညာ ရေး တ ကယ် အ ရေး ကြီး ပါ တယ် ။ လက် တည့် စမ်း နေ ရင် တ ကယ် ကို အ န္တ ရယ် ရှိ ပါ တယ် ။ Huawei CEO က ပ ညာ ရေး ကို အ လေး မ ထား ရင် တ ရုတ် နိုင် ငံ ဆင်း ရဲ တွင်း ထဲ ပြန် ဆင်း သွား ရ မယ် လို့ သ တိ ပေး ခဲ့ တယ် ။ မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ ဒီ အ တိုင်း ဆက် သွား ရင် ဆင်း ရဲ တွက် ထဲ က တက် ရ တော့ မှာ မ ဟုတ် တော့ တဲ့ အ ပြင် တွင်း ဆက် နက် နက် သွား ဖို ပဲ ရှိ ပါ တယ် ။ မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ် ) ၃၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉ မိုး တင့် ဆွေ ၃၀ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉ ကြာ သာ ပ တေး ။
Anonymous February 4, 2022 at 1:26 AM
JackpotCity Casino Site 2021 | Lucky Club
JackpotCity Casino is one of luckyclub the most trustworthy sites in the online gambling industry. They've been providing reliable online gaming since 1996. They Rating: 6/10 · ‎Review by LuckyClub.live